Shiinaha Customized lugo leh boorsada dugsiga-saareyaasha, shirkado, Warshad - xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Bacda dugsiga > Bacda iskuulka ee lugaha leh
(1) Tixgeli inta qalab ee aad qorsheynayso inaad sidato iyo inaad ubaahantahay jeebado iyo shaqooyin gaar ah. Haddii aad haysatid laptop, waxaad u baahan kartaa boorso boorso leh shaashad difaac ah oo ku dhex jirta laptop-ka. Laptop-yada qaar way ka waaweyn yihiin, markaa waxaad u baahan tahay boorso adiga kugu habboon. (2) Way fiicantahay inaad gacanta ku haysato shaashadda laptop-ka jeebka weyn, laakiin waa waxtar badan inaad haysato jeeb dheeri ah xagga hore. Jeebladani waxay ku habboon yihiin in lagu keydiyo waxyaabo yaryar sida lipstick, furayaasha guriga iyo qalabka socodka USB. Tixgeli abaabulka iyo shaqada; raadso astaamo sahlaya qalabkaaga (3) Boorsooyinka qaar waxay lahaan doonaan jeeb dhinaceed ama mesh dhinac jeexan si ay dhalo u qabsadaan. Markaad safrayso, way ku habboon tahay inaad biyo dhaansato.
Bacda dugsiga ee taayir leh
1. Soo bandhigida alaabta ee boorsada iskuulka ee taayirrada leh ee ardayga:
(1) Dharka kore ee ardaga boorsada iskuulka leh wuxuu ka sameysan yahay maro naylon oo cufan leh. Maadadani waxay leedahay xoog silibis adag iyo adkeysi abrasion. Cufnaanta sare ee dharka iyo dahaadhka biyaha celiya ayaa si wax ku ool ah uga hortagi kara roobka inuu qoyo. Boorsada, isku-dhafkan wuxuu leeyahay waxqabad aan biyuhu fiicnayn oo leh dhalaal sharaf leh. Waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4.
(5) Ardaygaaga boorsadiisa taayir leh waa mid la neefsan karo, oo u adkeysan karta xirashada, biyuhu diidaan isla markaana yareeya culeyska.
(8) Trolleyga ardaygaaga boorsada isku dhafan ee lugta leh ayaa loo kala qaybin karaa marka la doono. Naqshaddan waxaa loo isticmaali karaa oo keliya boorsada wax lagu riixo, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa boorsada dhabarka. Hal boorso ayaa ku habboon xaalado kala duwan.
Boorsada iskuulka ee ardayda lugaha leh
Dhererka 30cmX Width 16cmX Dhererka 43cm
3. Sidee loo doortaa boorsada iskuul ee la qaadi karo?
(1) Tixgeli inta qalab ee aad qorsheynayso inaad sidato iyo inaad ubaahantahay jeebado iyo shaqooyin gaar ah. Haddii aad haysatid laptop, waxaad u baahan kartaa boorso boorso leh shaashad difaac ah oo ku dhex jirta laptop-ka. Laptobyada qaar wey ka weyn yihiin, markaa waxaad u baahan tahay boorso adiga kugu habboon.
(2) Way fiicantahay inaad gacanta ku haysatid shaashadda laptop-ka jeebka weyn, laakiin waa waxtar badan inaad haysato jeeb dheeri ah xagga hore. Jeebladani waxay ku habboon yihiin in lagu keydiyo waxyaabo yaryar sida lipstick, furayaasha guriga iyo qalabka socodka USB. Tixgeli abaabulka iyo shaqada; raadi astaamo sahlaya qalabkaaga in la helo.
(3) Boorsooyinka qaar waxay lahaan doonaan jeeb dhinac ah ama mesh mesh dhinac ah si ay u qabsadaan dhalo. Markaad safrayso, way ku habboon tahay inaad biyo dhaansato.
(4) Haddii aad safar dheer leedahay, waxaad u baahan tahay boorso raaxo leh. Wuxuu la yimaadaa suumano suuxsan iyo dhabba-laabasho si ay uga caawiso yareynta buufiska. Adkaysiga suunka ayaa go'aamin doona inta culeys ee aad ku qaadan karto boorsadaada. Waxaa ugu wanaagsan inaadan xirxirin, haddii kale bacda wax ku baakadeysa ayaa waxyeelo soo gaari karta.
(5) Si loo bixiyo taageero dheeri ah, qaar ka mid ah boorsooyinka waaweyn ayaa leh suumano. Haddii aad raadineyso taageero dheeri ah, kuwani waxay noqon karaan kuwo kugu habboon. Waxay sidoo kale yarayn karaan culeyska dhabarka qaarkood, taasoo u horseedi karta nasasho iyo muuqaal xumo.
(6) Had iyo jeer waa wax lagu farxo in la haysto boorso moodada ka dhigaysa oo shakhsiyaddaada ka dhigaysa mid iftiima oo ka dhex muuqata dadka. Midabada kala duwan iyo qaababka waalan ayaa ugu habboon dharka maxaa yeelay waad beddeli kartaa badiyaa. Boorsooyinka dhabarku waa maalgashi ka weyn, markaa haddii xulashooyinkaaga moodada ahi ay si dhakhso ah isu beddelaan, waxaad ku dhegi kartaa wax dhexdhexaad ah. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso xaqiiqda ah in midabada khafiifka ahi ay fududahay in la wasakheeyo, sidaa darteed haddii aad jeceshahay bacaha nadiifka ah ama nooca qasan, waxaan kugula talineynaa midabada madow iyo midabada.
5. Xirxirida iyo gaarsiinta boorsooyinka iskuulka ee la qaadan karo
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: dherer dhererkiisu yahay 43cmX dherer 30cmX dherer ah 14cm, waxaannu u qaabeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka
(3) Faahfaahinta xirxirida: 45cm X 33m X 50cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 9.2Kg
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 7.2Kg
(8) Haddii loo baahdo, waxaan u qaabeyn doonnaa xirxirida shandadan iskuulka la qaadan karo si waafaqsan shuruudahaaga
(9) Haddii aad u baahan tahay muunad ka mid ah shandaddan gacmeed, waxaan dooran doonnaa inaan hawada kuugu soo dirno.
(5) Waxaan si adag u xakamayn doonnaa tayada badeecadaha oo aan kuugu soo gudbin doonaa adiga oo ku dhaafaya heerka 100%
(3) Waxaan nahay soo saare boorsooyinka Disney, boorsooyinka Wal-Mart, iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Calaamadaha kulul: Bacda dugsiga ee lugaha leh, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, loo habeeyay, qiimaha, oraahda, keydka